अब पत्रकारको तलब ३० हजार, रेडियो सञ्चारकर्मीलाई विभेद ! - अब पत्रकारको तलब ३० हजार, रेडियो सञ्चारकर्मीलाई विभेद !
अब पत्रकारको तलब ३० हजार, रेडियो सञ्चारकर्मीलाई विभेद !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २५ भदौ, 04:49:52 PM
काठमाडौ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सञ्चार माध्यममा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खोजतलासका सम्पादक बस्नेतलाई रिहाई गर्न माग
यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघ, उपत्यका प्रदेश समितिले खोजतलास डटकमका सम्पादक राजु बस्नेतको रिहाका लागि माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ :
२०७५, २५ भदौ, 04:49:52 PM
विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गर्न पत्रकार महासंघको माग